Public အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
2.30.6 for Android
4.3 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（20.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Public - Indian Local Videos
ဖြစ်ပြီး၊ သင့်အားဗွီဒီယိုတိုများမှသင့်မြို့၏နောက်ဆုံးသတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများကိုပို့ပေးသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏မြို့အနှံ့မှအရေးကြီးသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဗီဒီယိုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်း၌ရနိုင်မည့်ကြားခံတစ်ခုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
အများပြည်သူဆိုင်ရာပွဲများသို့မဟုတ်ခရစ်ကတ်ပြိုင်ပွဲများ၊ မီးပြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေပြတ်လပ်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်များသို့လည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာသာရေးပွဲများ
သင်၏မြို့တော်၌ဖြစ်ပျက်သမျှသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ပထမဆုံးရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။ အများသုံးအက်ပလီကေးရှင်းကို Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Punjab, Himachal တို့အတွက်အများပိုင် app ကို Hindi, Bengali, Gujarati, Marathi, Tamil, Kannada, Malayalam ပရာဒက်၊ အနောက်ဘင်္ဂလား၊ ထရီပူရာ၊ တယ်လီဂနာ၊ ကာနာတာကာ၊ ဂူဂျာရတ်၊ သင်၏အကြီးမားဆုံးလုယက်မှုသို့မဟုတ်မတော်တဆဖြစ်မှု
သင့်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ - သင့်ဒေသရှိရေပြတ်လပ်မှုနှင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ - သင့်မြို့တွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ခုံးကျော်တံတားအသစ်များနှင့်ရထားလမ်းအသစ်များတည်ဆောက်ခြင်း
သင့်မြို့ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများ - MSP သတင်းများနှင့်ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများ၏ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ - မြို့တော်
ထင်ရှားသော mandiri နှင့်ဘုရားကျောင်းများတွင်ပွဲတော်များနှင့်မယ်လများကျင်းပကြသည်။
- သင်၏နေ့စဉ်ရှုခင်းပုံပြင် - သင့်ဒေသ၏နောက်ဆုံးရာသီဥတုအခြေအနေအသစ်အဆန်းများ - သင့်မြို့တွင်းရှိအလုပ်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ - သင့်ဒေသအတွင်းရှိဘာသာရေးအဖြစ်အပျက်များနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ - အားလုံးအရေးကြီးပါသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်သင်သိသင့်သည့်မြို့တော်၏နေ့စွဲများ
- သတင်းတိုတိုများမှသင်၏မြို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးကိုကြည့်ပါ။ - ရယူရန် သင်၏မြို့တော်လက်ငင်း update လုပ်ခြင်း - နောက်ဆုံးပေါ်ပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးမျှဝေပါ။ - သင်၏ဒေသဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်သင်၏မြို့ပြproblemsနာများကိုအများပြည်သူသုံးအက်ပ်တွင်သတင်းပို့ပါ။ - သတင်းများသို့မဟုတ်သင်၏မြို့တော်အသစ်အဆန်းသတင်းများအတွက်ချက်ချင်းအသိပေးချက်များရယူပါ။ သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်တင်ထားသော 100% အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း
ကိုယနေ့ download လုပ်ပြီးသင်၏မြို့နှင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်မှုကိုခံစားပါ။
Public News Apk Review. Public Indian local video's Apk Review. public Apk Amazing Features 2020.
Chhattisgarh के Korba में हुयी हैवानियत की सारी हदें पार
"Public App - Indian Local Videos" Reviews | Grow your Business, Get Traffic, become Famous Locally
Digital Soft Hub
How To Fix Public - Indian local Videos Not Open Problem Android & Ios
Public - Indian Local Videos 2.30.4
Public - Indian Local Videos 2.30.3
Public - Indian Local Videos 2.30.2